27/02/2004: Submitted for publication via web
20-Ka February Oo Loo Aqoonsaday Maalinta Dhallinyarada Somaliland
by Haatuf, Hargeysa Feb, 22, 2004
Hargeysa Feb, 22, 2004 (Haatuf) – Munaasibad si weyn loo abaabulay oo loogu talo galay xuska maalintii dhagax-tuurka Ardayda Hargeysa ee la xidh-xidhay aqoon-yahankii iyo macalimiintii kooxda UFO ayaa maalintii doraad lagu qabtay fagaaraha khayriyada ee magaalada Hargeysa.
Xuska munaasibadan oo ahayd tii 22-aad ee sanad guuradii Feb, 20, 1982-kii waxay ahayd mid si weyn uga duwan munaasibadii hore ee lagu maamusi jiray maalintan, waxaana soo qaban qaabiyey ururka dhalinyarada ee SONYO. Waxaana ugu horeyn ka hadlay halkaa Maxamed Baaruud Cali oo ka mid ahaa aqoonyahanadii UFO ee ay xukuumaddii keli-teliska ahayd xabsiga u taxaabtay, wuxuuna sheegay in maalintaa halgan hubaysan lagu keenay xoriyada maanta, balse maanta loo baahan yahay in caqli lagu keeno wixii inaga maqan. Mr: Baaruud wuxuu u mahad celiyey dhalinyaradii soo abaabushay xuska oo uu sheegay inay ka furteen halw-weyn, wuxuuna ku dhiiriyay inay halkaa kasii wadaan.
Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa hadal kooban oo uu halkaa ka jeediyey kaga waramay ujeedada loo xusayo maalinta iyo maalmo kale oo badan oo uu sheegay in ujeedada laga leeyahay xuskoodu tahay in aanay dib u dhicin wixii hore u dhacay, wuxuuna si gaara uga hadlay qiimaha ay maalintani leedahay. Mr: Axmed Siilaanyo wuxu aad ugu mahad celiyey dhalinyaradii hawshan xuska soo qaban qaabisay, isla markaana waxa uu ka cudur daartay inuu wax siyaasada ka hadlo.
Hase yeeshee waxa uu isagoo ka hadlaya codsi ay dhalinyaradu kaga dalbadeen in mucaaarad iyo muxaafid wixii loo qabanayo laga sheego munaasibadan, waxa uu sheegay inay mucaarad iyo muxaafidba xukuumadii la doortay la daba taagan yahay, balse waxa uu xusay in soo jeedintaa dhalinyarada aanay xubnihii wasiiradda ee hadalka uga horeeyey soo hadal qaadin. Laakiin waxa uu xubnahaa ku amaanay sida ay uga hadleen maalintan qiimaha leh.
Sidaa awgeed waxa uu ugu baaqay xukuumadda inay wax ka qabato baahiyaha iyo shaqo la’aanta dhalinyarada, isagoo si gaara u xusay inay xukuumaddu wax ka qabato baahiyaha waxbarashada iyo caafimaadka. Guddoomiyaha Kulmiye Axmed Siilaanyo waxa uu sheegay in dhalinyarada loo baahan yahay inay is abaabulaan oo dalka wax u qabtaan iyo inay nabadgelyada ilaaliyaan, isla markaana xukuumad kasta oo timaada u bandhigaan waxyaabaha ay u baahan yihiin, isagoo xusay inay dhinacooda xisbi ahaan aanay taladii gacanta ku hayn oo ay dhalinyarada la mid yihiin, isla markaana ay dhamaantood xukuumadda Somaliland daba taagan yihiin.
Hase ahaatee Axmed Siilaanyo waxa uu xusay in maalinta xisbiga Kulmiye hogaanka qabto goor kasta ha gaadhee ay hubin doonaan inaanay dhicin wixii dhagax-tuurka ka dhacay oo kale iyo inay ka balan qaadayaan wixii himilooyinka dhalinyarada ah ee xagga nabadgelyada, waxbarashada, caafimaadka iyo horumarka bulsho inay wax weyn ka qabanayaan.
Wasiirka ganacsiga Maxamed Xaashi Cilmi oo hadal kooban halkaa ka jeediyey ayaa ugu horayn u mahad celiyey dhalinyaradii soo abaabushay xuska maalintan oo uu sheegay inay tahay mid qiimo wein ku leh halgankii iyo xoriyadii dalkan. Wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in layska ilaaliyo in dib loogu noqdo halkii dalkan iyo dadkan laga qaniinay. Mr. Maxamed Xaashi waxa uu sheegay inaan loo baahnayn inaynu cid kale wax ka sugno, balse ay dadku fadhiga ka kacaan oo ay wax qabsadaan, isagoo xusay marka laga hadlayo waxbarashada inay maanta qofkii wax baranaya ay dhib yar tahay, marka loo eego heerka ay maanta dunidu marayso iyo waqtigii hore, balse loo baahan yahay in dadka lagu tabco si horumar loo gaadho, wuxuuna tusaale u soo qaatay dalalka Japan iyo Koriya oo uu sheegay inay horumarkaa ku gaadheen aqoonta iyo tacabka la geliyey dadkooda.
Sidaa awgeed loo baahan yahay in dadku wax isku darsadaan oo la abuuro wax soo saar si horumar iyo wershedayn loo gaadho, isla markaana ay shaqooyinku u abuurmaan. Wasiirku waxa uu halkaa kaga dhawaaqay in maalinta 20 February hada wixii ka danbeeya loo aqoonsan doono maalinta dhalinyarada Somaliland.
Waxa isaguna maanso uu tiriyey 20 February 1982-kii halkaa ka tiriyey Abwaan Cali Xasan Aadan (Cali Banfas), taas oo uu ugu talo galay xuska maalintan, wuxuuna Abwaanku sheegay inuu maansadan tiriyey maalintaa dhagax-tuurka ardayda, balse uu maanta xusuusinayo dhalinyarada.
The views published here are solely those of its authors (Haatuf, Hargeysa Feb, 22, 2004) and do not necessarily reflect those of REDSEA-ONLINE.COM.